2011 – Year – Alpha Premium
The Adjustment Bureau (App member only) ##unicode ကျွန်တော်တို့တွေ ကံကံအကျိုးကိုယုံကြတယ်မလား..တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တယ် အဆင်မပြေဘူး ကံမကောင်းပါဘူးကွာဆိုပြီးလက်လျော့တတ်ကြပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တော့ ကံပေါ့ တခြားဘာသာတွေအတွက်တော့ ဘုရားသခင် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။) ကံဆိုတာ လူကလုပ်ရမှာပါ...ကံမကောင်းပါဘူးကွာဆိုပြီးထိုင်မှိုင်နေမယ့်အစား ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရမှာပါ ဒီကားမှာလဲ ကံတရားကမျက်နှာသာမပေးပဲကွဲစေချင်ပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေရဲ့ အချစ်သာတကယ်စစ်မှန်ရင် ဘယ်လိုတန်ခိုးရှင်ကမှခွဲလို့မရဘူးဆိုတာကို တွေ့ရမာပါ ၁၉၅၄ ခုနှစ်လောက်က Philip K Dick ရဲ့ဝတ္ထုတို Adjustment Bureau ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး နာမည်ကြီးမင်းသား မင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Matt Damon Emily Blunt တို့ပါဝင်ထားတဲ့ sci-fi romance ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ ဒေးဗစ်လာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့အယ်လီစီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မတော်တဆဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဒေးဗစ်ဟာအယ်လီစီကို ချစ်ကြိုက်သွားပါတော့တယ် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘတ်စ်ကားပေါ်မှာနောက်ထပ်ဆုံတွေ့ပြီးအယ်လီစီက ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒေးဗစ်တစ်ယောက်ပျော်ရွှင်နေတုန်းမှာထူးဆန်းတဲ့လူတစ်စုပေါ်လာပြီး အယ်လီစီနဲ့တွေ့ဆုံမှာကိုနှောင့်ယှက်ပါတော့တယ် ထူးဆန်းတဲ့လူတွေရဲ့သရုပ်မှန်ကဘာလဲ အယ်လီစီနဲ့ဒေးဗစ်တို့ကိုဘာလို့နှောင့်ယှက်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ကံကံအက်ိဳးကုိယံုႀကတယ္မလား..တစ္ခုခုလုပ္လိုက္တယ္ အဆင္မေျပဘူး ကံမေကာင္းပါဘူးကြာဆိုျပီးလက္ေလ်ာ့တတ္ႀကပါတယ္။ (ဒီေနရာမွာ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ေတာ့ ကံေပါ့ တျခားဘာသာေတြအတြက္ေတာ့ ဘုရားသခင္ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။) ကံဆိုတာ လူကလုပ္ရမွာပါ...ကံမေကာင္းပါဘူးကြာဆိုျပီးထိုင္မိႈင္ေနမယ့္အစား ဘယ္လိုရေအာင္လုပ္ရမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားရမွာပါ ဒီကားမွာလဲ ကံတရားကမ်က္ႏွာသာမေပးပဲကဲြေစခ်င္ေပမယ့္ ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ အခ်စ္သာတကယ္စစ္မွန္ရင္ ဘယ္လိုတန္ခိုးရွင္ကမွခဲြလို႔မရဘူးဆိုတာကို ေတြ႔ရမာပါ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ေလာက္က Philip K Dick ရဲ႕ဝတၳဳတို Adjustment ...
IMDB: 7.0/10 251,851 votes
Saheb Biwi Aur Gangster (2011) (App member only) ##umicode အခုတင်ဆက်လိုက်ပေးတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ Sahebဇာတ်ကားတွဲတွေထဲကမှ ပထမဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု၊ လူ့လောဘတွေအကြောင်းကို ရသအစုံအလင်နဲ့ကြည့်ရူရမယ့် romantic thrillerဇာတ်ကားကောင်းပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကြည့်လိုက်ရအောင် ဘုရင်စနစ်ကုန်သွားပေမယ့် ဘိုးဘွားတွေချန်ရစ်ခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်တွေနဲ့ ဘုရင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ ဘုရင်ဖြစ်သူ Aditya Pratapဟာ အတော်ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့ဆီမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဘုရင်ဆိုတဲ့အတိုင်း အငယ်အနှောင်းလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ဒါကို ဘုရင်မက မနှစ်မြို့ပါဘူး ဘုရင်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိဖို့ကြိုးစားရင်း ဘုရင်မဟာ မေတ္တာငတ်နေခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ဘုရင်မရဲ့ဘဝထဲကို Bablooဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် Bablooက ဘုရင်ကြီးကိုလုပ်ကြံဖို့အကြံနဲ့ ပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းကလွှတ်လိုက်တဲ့ သူလျိုပါ မေတ္တာငတ်နေတဲ့ဘုရင်မနဲ့ Bablooတို့ ငြိစွန်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဘုရင်ကြီးကိုလုပ်ကြံဖို့အကြံအစည်ကို သူ ဆက်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာလား ဘုရင်ကြီးက သူ့အငယ်အနှောင်းဆီမှာပဲစိတ်ရောက်နေပြီး ဘုရင်မကိုပစ်ထားတော့မှာလားဆိုတဲ့ အရူပ်အထွေးတွေကို စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။##zawgyi အခုတင္ဆက္လိုက္ေပးတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ Sahebဇာတ္ကားတြဲေတြထဲကမွ ပထမဆုံးထြက္ရွိထားတဲ့ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ႏိုင္ငံေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ လူ႔ေလာဘေတြအေၾကာင္းကို ရသအစုံအလင္နဲ႔ၾကည့္႐ူရမယ့္ romantic thrillerဇာတ္ကားေကာင္းပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးၾကည့္လိုက္ရေအာင္ ဘုရင္စနစ္ကုန္သြားေပမယ့္ ဘိုးဘြားေတြခ်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အေမြအႏွစ္ေတြနဲ႔ ဘုရင္ဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ ဘုရင္ျဖစ္သူ Aditya Pratapဟာ အေတာ္႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူ႔ဆီမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘုရင္ဆိုတဲ့အတိုင္း အငယ္အေႏွာင္းလည္းရွိခဲ့ပါတယ္ ဒါကို ဘုရင္မက မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါဘူး ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကိုရရွိဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ဘုရင္မဟာ ေမတၱာငတ္ေနခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ ...
IMDB: 7.2/10 4,102 votes
The Devil’s Double (2011) (App member only) ##uniucode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Devil's Double ဆိုတဲ့ Action/Thriller ကားလေးတစ်ကားကို ရွေးချယ်ထားပါတယ် ဝင်ငွေ ၁၉.၁ မီလီယံရထားတဲ့အပြင်Box office မှာလည်း ၄.၈ မီလီယံအထိရရှိအောင်မြင်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လာတစ်ဖ်ဟာအီရပ်စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာတော့ ဆာဒမ်ဟူစိန်ရဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ပွေရှုပ်တဲ့သားဖြစ်သူ အူဒေးဆာဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ကိုယ်ပွားအနေနဲ့နေပေးဖို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပါတယ် ရက်စက်တဲ့နေရာမှာကျော်ကြားတဲ့အူဒေးရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ရင်သေလမ်းပဲရှိတာမလို့ လာတစ်ဖ်တစ်ယောက်အူဒေးပြောသမျှခိုင်းသမျှကိုလိုက်လုပ်ပေးနေရပါတော့တယ် လာတစ်ဖ်တစ်ယောက်အူဒေးရဲ့လက်အောက်ကနေရုန်းထွက်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားရုန်းကန်သွားမလဲ အူဒေးရဲ့ရက်စက်ယုတ်မာမှု မထီမဲ့မြင်လုပ်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ့်သူဟာ လာတစ်ဖ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Devil's Double ဆိုတဲ့ Action/Thriller ကားေလးတစ္ကားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဝင္ေငြ ၁၉.၁ မီလီယံရထားတဲ့အျပင္Box office မွာလည္း ၄.၈ မီလီယံအထိရရွိေအာင္ျမင္ထားတဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ လာတစ္ဖ္ဟာအီရပ္စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္မွာေတာ့ ဆာဒမ္ဟူစိန္ရဲ႕နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ေပြရႈပ္တဲ့သားျဖစ္သူ အူေဒးဆာဒမ္ဟူစိန္ရဲ႕ကိုယ္ပြားအေနနဲ႔ေနေပးဖို႔ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရပါတယ္ ရက္စက္တဲ့ေနရာမွာေက်ာ္ၾကားတဲ့အူေဒးရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈကိုျငင္းပယ္ရင္ေသလမ္းပဲရွိတာမလို႔ လာတစ္ဖ္တစ္ေယာက္အူေဒးေျပာသမွ်ခိုင္းသမွ်ကိုလိုက္လုပ္ေပးေနရပါေတာ့တယ္ လာတစ္ဖ္တစ္ေယာက္အူေဒးရဲ႕လက္ေအာက္ကေန႐ုန္းထြက္ဖို႔ဘယ္လိုႀကိဳးစား႐ုန္းကန္သြားမလဲ အူေဒးရဲ႕ရက္စက္ယုတ္မာမႈ မထီမဲ့ျမင္လုပ္မႈေတြကိုအဆုံးသတ္ႏိုင္မယ့္သူဟာ လာတစ္ဖ္ျဖစ္လာမလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2GB,1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Action Subtitle : ...
IMDB: 7.1/10 61,152 votes
Case départ (2011) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ အလယ်ခေတ်မှာ လူမည်းတွေကိုကျွန်ပြုခဲ့တဲ့ကာလအကြောင်း ဟာသလေးတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ အသိပညာပေးဇာတ်လမ်းပါ။ ဂျိုဝီနဲ့ရီဂျစ်တို့က လူမည်းဖခင်ကမွေးထားတဲ့ အဖေတူအမေကွဲညီအစ်ကိုတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ညီအစ်ကိုက မိသားစုကိုယ်စီနဲ့ ပြင်သစ်မှာနေထိုင်ကြပြီး အဖေဖြစ်သူကတော့ အာဖရိကမှာပဲကျန်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့အဖေသေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဖုန်းဆက်လာတော့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်စလုံး အာဖရိကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ သူတို့အဖေကသေခါနီးမှာ သူတို့ညီအစ်ကိုအတွက် မိသားစုအစဉ်အဆက်ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ရတနာတစ်ခုကို အမွေပေးသွားခဲ့တယ်။ အဲ့အမွေကတော့ ကျွန်ခေတ်တုန်းက သူတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လည်း ဒီစာရွက်ကြီးဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီး ဖြဲပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ အလယ်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မုဆိုးတွေရောင်းစားတာခံရပြီး စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ ပြင်သစ်သူဌေးကြီးတစ်ယောက်အိမ်ရောက်သွားပါတယ်။ ဂျိုဝီနဲ့ရီဂျစ်တို့ ဒီကျွန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပြီး ဒီဘက်ကိုခေတ်ကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားကြမလဲဆိုတာကို ဟာသနှောရိုက်ကူရင်းး ကျွန်ခေတ်ရဲ့ရက်စက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေကိုပါ ရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးမယ့္ဇာတ္ကားေလးကေတာ့ အလယ္ေခတ္မွာ လူမည္းေတြကိုကြၽန္ျပဳခဲ့တဲ့ကာလအေၾကာင္း ဟာသေလးေတြနဲ႔႐ိုက္ကူးထားတဲ့ အသိပညာေပးဇာတ္လမ္းပါ။ ဂ်ိဳဝီနဲ႔ရီဂ်စ္တို႔က လူမည္းဖခင္ကေမြးထားတဲ့ အေဖတူအေမကြဲညီအစ္ကိုေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ညီအစ္ကိုက မိသားစုကိုယ္စီနဲ႔ ျပင္သစ္မွာေနထိုင္ၾကၿပီး အေဖျဖစ္သူကေတာ့ အာဖရိကမွာပဲက်န္ခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူတို႔အေဖေသအံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဖုန္းဆက္လာေတာ့ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္စလုံး အာဖရိကိုျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔အေဖကေသခါနီးမွာ သူတို႔ညီအစ္ကိုအတြက္ မိသားစုအစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းလာတဲ့ရတနာတစ္ခုကို အေမြေပးသြားခဲ့တယ္။ အဲ့အေမြကေတာ့ ကြၽန္ေခတ္တုန္းက သူတို႔ဘိုးေဘးေတြရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔လည္း ဒီစာ႐ြက္ႀကီးဘာမွအသုံးမဝင္ဘူးဆိုၿပီး ၿဖဲပစ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ျပန္ႏိုးလာတဲ့အခါမွာေတာ့ အလယ္ေခတ္ကိုျပန္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မုဆိုးေတြေရာင္းစားတာခံရၿပီး စိုက္ခင္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ျပင္သစ္သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္အိမ္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဂ်ိဳဝီနဲ႔ရီဂ်စ္တို႔ ဒီကြၽန္ဘဝကေနလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီး ဒီဘက္ကိုေခတ္ကိုျပန္လာႏိုင္ဖို႔ ...
IMDB: 5.8/10 2,513 votes
Tower Heist (2011) ##unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Box office မှာ 152.9 သန်းအထိရရှိထားတဲ့ comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Night at the museum ထဲမှာသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဟာသမင်းသားကြီး Ben Stiller ကအဓိကဇာတ်ဆောင်ဂျော့ရှ်အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဂျော့ရှ်ကိုဗက်ဟာနာမည်ကြီးမိုးမျှော်တိုက်ခန်းမှာမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်မစ္စတာရှောဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဟာ သူတို့တိုက်ခန်းမှာနေတာကြာပြီးဖြစ်ပြီး အားလုံးကလည်းအရမ်းကိုချမ်းသာတဲ့သူအဖြစ်သိထားတာပါ ဒါကြောင့်မလို့ ဂျော့ရှ်ဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပင်စင်ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခိုင်းလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ရှောဆိုသူဟာသူများတွေရဲ့ပိုက်ဆံကိုလိမ်လည်ယူနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျော့ရှ်ဟာပိုက်ဆံတွေပြန်မရနိုင်တာကိုသိတဲ့အခါ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ချို့နဲ့ပေါင်းပြီး ရှောရဲ့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့မီးခံသေတ္တာထဲက ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကိုခိုးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဂျော့ရှ်တို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပိုက်ဆံတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ရယ်မောဖွယ် ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ Box office မွာ 152.9 သန္းအထိရရွိထားတဲ့ comedy ဇာတ္ကားေကာင္း တစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Night at the museum ထဲမွာသ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဟာသမင္းသားႀကီး Ben Stiller ကအဓိကဇာတ္ေဆာင္ေဂ်ာ့ရွ္အျဖစ္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ေဂ်ာ့ရွ္ကိုဗက္ဟာနာမည္ႀကီးမိုးေမွ်ာ္တိုက္ခန္းမွာမန္ေနဂ်ာအျဖစ္အလုပ္လုပ္ပါတယ္မစၥတာေရွာဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ဟာ သူတို႔တိုက္ခန္းမွာေနတာၾကာၿပီးျဖစ္ၿပီး အားလုံးကလည္းအရမ္းကိုခ်မ္းသာတဲ့သူအျဖစ္သိထားတာပါ ဒါေၾကာင့္မလို႕ ေဂ်ာ့ရွ္ဟာဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ပင္စင္ေငြေတြကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခိုင္းလိုက္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ေရွာဆိုသူဟာသူမ်ားေတြရဲ႕ပိုက္ဆံကိုလိမ္လည္ယူေနတဲ့သူပဲျဖစ္ပါတယ္ ေဂ်ာ့ရွ္ဟာပိုက္ဆံေတြျပန္မရႏိုင္တာကိုသိတဲ့အခါ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ေပါင္းၿပီး ေရွာရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတဲ့မီးခံေသတၱာထဲက ေဒၚလာသန္း ၂၀ ကိုခိုးဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ ေဂ်ာ့ရွ္တို႔ေနာက္ဆုံးမွာသူတို႔ပိုက္ဆံေတြကိုျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးနဲ႔ရယ္ေမာဖြယ္ ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : ...
IMDB: 6.2/10 134422 votes
Coriolanus (2011) ##unicode Rating 6.1 ရထားတဲ့ဒီကားမှာ မင်းသားကြီး (Greenland 2020,fallen မင်းသား 300မင်းသား)ရယ်လို့လူသိများတဲ့ Gerard Butler နဲ့ Ralph Fiennes တို့ပါတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ ဒီကားလေးကတော့ ရှိတ်စပီးယားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ရောမခေတ်ကစစ်သူကြီးတစ်ယောက်အကြောင်း ပြဇာတ်ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ပြောရာဇဝင်တွေအရတော့ ဒီပြဇာတ်ဇာတ်လမ်းဟာ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝဇာတ်လမ်းကို အခြေခံရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ မားရှတ်စ်ဟာ ရဲစွမ်းသတ္တိပြည့်ဝပြီး ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ပါ။ ရောမကိုကျူးကျော်လာတဲ့ ဗော့စကီစ်တွေကို ရွတ်ရွတ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး အောင်ပွဲနဲ့အတူ အိမ်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုပြည်သူတွေက ချစ်ကြတော့ မားရှတ်စ်ရဲ့အမေက လွှတ်တော်ထဲမှာ ကောင်စစ်ဝန်နေရာကိုဝင်ပြိုင်ဖို့ပြောပါတယ်။ သူကပထမပိုင်းစိတ်မဝင်စားပေမဲ့ သူ့အမေစကားကိုနာခံရင်း ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စစ်ပွဲစွမ်းဆောင်ချက်တွေကြောင့် လူထုထောက်ခံမှုရပြီး သူဟာ ကောင်စစ်ဝန်ရာထူးကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့မာန်မာနကြီးတဲ့ပုံစံကို မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတဲ့အခါမှာတော့ ပြည်သူတွေကိုသွေးထိုးပြီး သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ သူဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံရမှာလဲ၊ သူအသက်ပေးကာကွယ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကရော သူ့ဘက်ကရှိနေပေးမလား၊ တိုင်းပြည်နဲ့ကလဲ့စားချေဖို့မှာ သူဘာကိုရွေးချယ်မလဲ ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi Rating 6.1 ရထားတဲ့ဒီကားမွာ မင္းသားႀကီး (Greenland 2020,fallen မင္းသား 300မင္းသား)ရယ္လို့လူသိမ်ားတဲ့ Gerard Butler နဲ႔ Ralph Fiennes တို႕ပါတဲ့ကားေကာင္းေလးတစ္ကားပါ ဒီကားေလးကေတာ့ ...
IMDB: 6.1/10 30,930 votes
Burnt by the Sun 2: Citadel (2011) ##unicode ဒီကားလေးကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဂျာမန်တို့ရဲ့စစ်မြေပြင်ပေါ် အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဂျာမန်တွေလက်အောက်က မြို့စောင့်ခံတပ်တစ်ခုကို ဆိုဗီယက်ဘက်က အသည်းအသန်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှမသိမ်းနိင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ခံတပ်ကကုန်းမြင့်ပေါ်မှာရှိပြီး ခံတပ်ရှေ့ကလည်း သစ်ပင်ကြီးမရှိလဲ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက် တက်လာသမျှစစ်သားကို ခံတပ်ပေါ်ကနေ အသာလေးစီးပစ်နေရုံပါပဲ။ အဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်က တပ်တွင်းစည်းကမ်းဖောက်တဲ့သူတွေထားတဲ့ အကျဉ်းသားတပ်ခွဲကို ရှေ့တန်းကနေခံတပ်ဆီရောက်အောင်တက်ခိုင်းပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ မင်းတို့သွားအသေခံလိုက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အမိန့်ဆိုတော့လည်း ငြင်းမရဘဲသွားတိုက်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့တပ်ခွဲထဲမှာ အရင်ကဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ရာထူးချခံထားရတဲ့ ကိုတော့ဗ်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိသားစုကတော့ သူသေသွားပြီလို့ပဲသိထားခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့တပ်ခွဲချီတက်ခါနီးမှာပဲ ကိုတော့ဗ်ကို ဗိုလ်တစ်ယောက်ကလာရှာပြီး သူ့ကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်ပါ ရာထူးတိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့နောက်ကွယ်က ဇာတ်ကြောင်းကဘာများလဲ၊ ကိုတော့ဗ်က ဘာလို့ရာထူးချခံခဲ့ရပြီး အခုရောဘာလို့ရာထူးပြန်ပေးခံရတာလဲ၊ ဒီသိမ်းရခက်ခဲတဲ့ ခံတပ်ကိုရော သူတို့သိမ်းနိုင်ပါ့မလား၊ အတိုက်အခိုက်ကြမ်းကြမ်းလေးရော ဒရမ်မာလေးကိုပါ တစ်ပေါင်းတည်းကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီကားေလးကေတာ့ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဂ်ာမန္တို႔ရဲ႕စစ္ေျမျပင္ေပၚ အေျခခံ႐ိုက္ကူးထားတာပါ။ ဂ်ာမန္ေတြလက္ေအာက္က ၿမိဳ႕ေစာင့္ခံတပ္တစ္ခုကို ဆိုဗီယက္ဘက္က အသည္းအသန္တိုက္ခိုက္ေပမဲ့ ဘယ္လိုမွမသိမ္းနိင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ခံတပ္ကကုန္းျမင့္ေပၚမွာရွိၿပီး ခံတပ္ေရွ႕ကလည္း သစ္ပင္ႀကီးမရွိလဲ ဟင္းလင္းျပင္ႀကီးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တက္လာသမွ်စစ္သားကို ခံတပ္ေပၚကေန အသာေလးစီးပစ္ေန႐ုံပါပဲ။ အဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္က တပ္တြင္းစည္းကမ္းေဖာက္တဲ့သူေတြထားတဲ့ အက်ဥ္းသားတပ္ခြဲကို ေရွ႕တန္းကေနခံတပ္ဆီေရာက္ေအာင္တက္ခိုင္းပါေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ မင္းတို႔သြားအေသခံလိုက္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ အမိန႔္ဆိုေတာ့လည္း ျငင္းမရဘဲသြားတိုက္ဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲ့တပ္ခြဲထဲမွာ အရင္ကဗိုလ္မႉးႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ...
Intruders (2011) ##unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ဂျွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့မီရာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို မျက်နှာမပါတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးက ညဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးနှောင့်ယှက်တိုက်ခိုက် တဲ့အကြောင်းကိုယှဉ်ပြီးပြထားတာပါ မီရာဟာဂျွန်ဖာရိုနဲ့ ဆူဆန်နာတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေ့သူ့ အဘိုးအဘွားဆီကိုသွားလည်ရင်းမျက်နှာမပါတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်း ရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုဖတ်ရာကနေ ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရတာပါ သူမအဖေဂျွန်ဖာရိုကလည်းအိမ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့မျက်နှာမပါတဲ့သူကို ခြောက်ချားဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ် ဂျွန်ဖာရိုဟာသူ့သမီးကိုမကောင်းဆိုးဝါးလက်ကကယ်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် မီရာ့ကိုမျက်နှာမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးက ဘာလို့နှောင့်ယှက်နေတာလဲ ဂျွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကောမီရာတို့မိသားစုနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွှယ်နေတာလဲ ဂျွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကော မီရာ့လိုမျိုး မကောင်းဆိုးဝါးနှောင့်ယှက်တာကို ဘာကြောင့်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ဂြၽန္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔မီရာဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ကို မ်က္ႏွာမပါတဲ့မေကာင္းဆိုးဝါးက ညဘက္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာလာၿပီးေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ တဲ့အေၾကာင္းကိုယွဥ္ၿပီးျပထားတာပါ မီရာဟာဂြၽန္ဖာ႐ိုနဲ႔ ဆူဆန္နာတို႔ရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာသမီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔သူ႔ အဘိုးအဘြားဆီကိုသြားလည္ရင္းမ်က္ႏွာမပါတဲ့ မေကာင္းဆိုးဝါးအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့စာ႐ြက္ကိုဖတ္ရာကေန ၿပီးေတာ့မေကာင္းဆိုးဝါးရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုခံရတာပါ သူမအေဖဂြၽန္ဖာ႐ိုကလည္းအိမ္ထဲကိုေရာက္ေနတဲ့မ်က္ႏွာမပါတဲ့သူကို ေျခာက္ခ်ားဖြယ္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္ ဂြၽန္ဖာ႐ိုဟာသူ႔သမီးကိုမေကာင္းဆိုးဝါးလက္ကကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ မီရာ့ကိုမ်က္ႏွာမဲ့မေကာင္းဆိုးဝါးက ဘာလို႔ေႏွာင့္ယွက္ေနတာလဲ ဂြၽန္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးကေကာမီရာတို႔မိသားစုနဲ႔ဘယ္လိုဆက္ႏႊယ္ေနတာလဲ ဂြၽန္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးကေကာ မီရာ့လိုမ်ိဳး မေကာင္းဆိုးဝါးေႏွာင့္ယွက္တာကို ဘာေၾကာင့္ခံေနရတယ္ဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Duration… 1h 40min Genre : Fantasy, Horror, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 5.4/10 19,955 votes
Jump Ashin! IMDb Rating – 7.1 / 10 Native Title – 翻滚吧！阿信 ဒီကားေလးကေတာ့ Director Yu-Hsien Linရဲ႕ gymnast ညီအစ္ကိုတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကိုအေျခခံ႐ိုက္ထားတာပါ အားရွင္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ ငယ္ငယ္ထဲကကြၽမ္းဘားကိုအရမ္းဝါသနာပါၿပီး ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာကြၽမ္းဘားေလ့က်င့္ရင္းနဲ႔ပဲ သူ႔ဘဝကိုကုန္ဆုံးခဲ့ပါတယ္ အားရွင္ရဲ႕အေမကလည္း ဒီကြၽမ္းဘားအားကစားက သူ႔သားဘဝအတြက္ တက္လမ္းမရွိဘူးမျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုကာ အဖြဲ႕ကေနထုတ္ေပးဖို႔နည္းျပဆီေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိမ္မက္ကိုဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အားရွင္ဟာအ႐ြဲ႕တိုက္လမ္းမွားေလွ်ာက္ရာက ဘဝဒုကၡအခ်ိဳးအေကြ႕ကိုႀကဳံေတြ႕ရင္း တိုင္ေပေရာက္သြားခ်ိန္… တိုင္ေပမွာကိစၥေတြျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္… အားရွင္ကြၽမ္းဘားေလာကထဲျပန္ဝင္မလား? သူ႔အားနည္းခ်က္ကို ဘာလဲ? ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာကို ဒီကားေလးထဲေတြ႕ျမင္ရမွာပါ…။
IMDB: 7.1/10 636 votes
Jack and Jill ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မိသားစုေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းစုက Jack နဲ႔ Thanksgiving ေရာက္တိုင္း တစ္ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္ အစ္ကိုရွိရာေနရာကို လာလာလည္တဲ့ သူ႔ရဲ႕အႁမႊာညီမေလး Jill… ကေလးဆန္ၿပီး ႐ိုးသားပြင့္လင္းတဲ့ အေဒၚအပ်ိဳႀကီး Jill ဟာ တူတူမေတြနဲ႔ေပ်ာ္ရင္းပါးရင္း ဒိတ္လုပ္ဖို႔ပါ အႀကံဉာဏ္ရၿပီး သူရဲ႕ဖူးစာရွင္ကို ရွာေဖြပါေတာ့တယ္ ။ ညီမျဖစ္သူရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြေၾကာင့္စိတ္ရႈပ္ေနတဲ့ Jack ကေတာ့ သူ႔ညီမ ျမန္ျမန္ျပန္ဖို႔ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ေနပါေတာ့တယ္.. တစ္ဖက္မွာလည္း မင္းသားႀကီးAl Pacino နဲ႔သာေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ client ေၾကာင့္အခက္ေတြ႕ေနတဲ့ Jack ကစားပြဲတစ္ခုမွာAl Pacino နဲ႔အလုပ္အေၾကာင္းေျပာဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ထင္မွတ္မထားပဲ ညီမျဖစ္သူကိုပါစိတ္ဝင္စားသြားေၾကာင္း သိလိုက္ရတဲ့အခါ Jack ဟာဘယ္လို ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြထုတ္သုံးၿပီး စီမံသြားမလဲဆိုတာကိုၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္…။ ဒီအႁမႊာေမာင္ႏွမရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးကို ဟာသဆန္ဆန္႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္လို႔ ၾကည္ရႈသူမ်ားဘဝအေမာေတြေျပေစဖို႔တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္…။
IMDB: 3.3/10 76,897 votes
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale ##unicode ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းမှာ ရှေးအခါကနေ ယနေ့ထိတိုင် စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ နယ်မြေလိုချင်လို့၊ အာဏာလိုချင်လို့၊ မာန်မာန၊ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲတွေပေါ့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ် ၁၈၉၅ ခုနှစ် ဂျပန်-တရုတ်ရှီမိုနီဆာကီ သဘောတူစာချုပ်အရ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ရဲ့ နယ်ချဲ့ကျူးကျော်မှုအောက်မှာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလည်းကျရောက်ခဲ့ပါတယ် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ရှေးအစဦးကတည်းက တည်ရှိနေတဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သက်တန့်သူရဲကောင်းလို့ခေါ်တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေရှိခဲ့ပါတယ် အဲဒီလူရိုင်းမျိုးနွယ်စုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမဲလိုက်နယ်မြေတွေကို ဂျပန်တွေရဲ့ မတရားသိမ်းပိုက်မှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေအောက်က ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် မျိုးနွယ်စု ၆ ခုက စစ်သည်တော်ပေါင်း ၃၀၀ လောက်က ဂျပန်တွေကိုတော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့ တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ ဒီဇာတ်ကားကို စတင်ရိုက်ကူးစဉ်က ဖလင်ဇာတ်ကား ၂ ခုအဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တာပါ အခု ဇာတ်ကားတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းထားတာပါ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး IMDB 7.5 ရရှိထားပါတယ် စစ်ပွဲရဲ့အနိဠာရုံတွေကို ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပြီး လူရိုင်းတွေရဲ့ ရက်စက်တဲ့ သတ်ဖြတ်ခန်းတွေပါဝင်တဲ့အတွက် အသက်မပြည့်သူတွေနဲ့၊ စိတ်မခိုင်တဲ့သူတွေ ကြည့်ရှုဖို့မသင့်တော်ပါဘူး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်တာမို့ လက်မလွတ်တမ်း အားပေးလိုက်ပါဦး ##zawgyi ကမာၻနဲ႔တ၀န္းမွာ ေရွးအခါကေန ယေန႔ထိတိုင္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာပါ နယ္ေျမလိုခ်င္လို႔၊ အာဏာလိုခ်င္လို႔၊ မာန္မာန၊ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တိုက္ၾကတဲ့စစ္ပြဲေတြေပါ့ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ထိုင္၀မ္ကၽြန္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုရိုက္ကူးထားတဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ ...
IMDB: 7.5/10 6,546 votes
Kaiji 2: The Ultimate Gambler 2011 တုန်းကထွက်ခဲ့ပီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Japan လောင်းကစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် ပထမကားမှာ Kaiji2တစ်ယောက် အလုပ်ကြမ်းဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်သွားပေမဲ့ ပိုက်ဆံတော့ မချမ်းသာသွားခဲ့ပါဘူး အခု ဒုတိယကားမှာ အကြွေးတွေပြန်တင်ပီး အရင်လို အလုပ်ကြမ်းသမားပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ အသက်နဲ့လောင်းရတဲ့ လောင်းကစားပွဲတွေမှာပြန်လည်အနိုင်ရပီး အရင်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမဲ့ imdb 6.5 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်.
IMDB: 8.1/10 4,351 votes
IMDB: 3.1/10 4,556 votes
Kill the Irishman (2011) #Unicode ဒီကားက ကလီဗီလန်းမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ရုရှားမာဖီးယားတွေကြား ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အိုင်းရစ်သားကြီး အကြောင်းပါ။ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန် အတ္ထုပ္ပတ္တိကားလဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေမှာ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဒန်နီဂရင်းနီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်နီဟာ အိုင်းရစ်သား၊ မဟုတ်မခံပြန်ပြောတဲ့သူ။ အထက်တန်းနဲ့ကျောင်းပြီးပေမယ့် စာအရမ်းဖတ်တယ်။ သာမန်ဘဝကနေပြီးတော့ မာဖီးယားတွေနဲ့ဘယ်လိုပတ်သတ်လာလဲ။ မာဖီးယားတွေ သူ့ကိုသတ်ဖို့ဘယ်လောက်ထိကြိုး စားကြလဲဆိုတာတွေရမှာပါ။ မာဖီးယားကားပီပီ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကား IMDb Rating 7.1/10 ထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ #Zawgyi ဒီကားက ကလီဗီလန္းမွာႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ ႐ုရွားမာဖီးယားေတြၾကား ထင္ရွားခဲ့တဲ့ အိုင္းရစ္သားႀကီး အေၾကာင္းပါ။ တကယ္ျဖစ္ရပ္မွန္ အတၳဳပၸတၱိကားလဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေက်ာ္ ၾကားခဲ့တဲ့ ဒန္နီဂရင္းနီးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒန္နီဟာ အိုင္းရစ္သား၊ မဟုတ္မခံျပန္ေျပာ တဲ့သူ။ အထက္တန္းနဲ႔ေက်ာင္းၿပီးေပမယ့္ စာအရမ္းဖတ္တယ္။ သာမန္ဘဝကေနၿပီးေတာ့ မာဖီးယားေတြနဲ႔ဘယ္လိုပတ္သတ္လာလဲ။ မာဖီးယားေတြ သူ႔ကိုသတ္ဖို႔ဘယ္ေလာက္ထိႀကိဳး စားၾကလဲဆိုတာေတြရမွာပါ။ မာဖီးယားကားပီပီ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား IMDb Rating 7.1/10 ထိရရွိထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလးမို႔ တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္။
IMDB: 7.1/10 44,616 votes
Rango (2011) 2011 အော်စကာ ဆုပေးပွဲမှာ Academy Award for Best Animated Feature ကို ရထားတဲ့ ဒီ Rango ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးက ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာကပဲ …။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်အရမ်းပြည့်၀ နေလို့ပဲ … Rango ဆိုတာ က ပုတ်သင်လေးတစ်ကောင်ရဲ့ နာမည်ပေါ့ ..။ လောကကြီးအတွက်သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သမား ပုတ်သင်လေးပေါ့ …။ သူ့ ရဲ့ အကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်က သူရဲကောင်းအဖြစ်နဲ့ မင်းသမီးလေးကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ …။ အမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်နေတက်တဲ့ သူပဲ …။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ သူဟာ သဲကန္တာရထဲမှာ သောင်တင်ခဲ့ရတယ် …။ ပြီးတော့ ရေပြတ်လပ်မှု ပြသနာ ဖြစ်နေတဲ့ မြို့ငယ်လေးကို ရောက်သွားတယ် …။ ကိုယ်တိုင်ကသာ ဘာမှ ...
IMDB: 7.2/10 230,216 votes
IMDB: 6.8/10 187,172 votes
IMDB: 6.0/10 85,645 votes